राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको उपलब्धी के ? यस्तो छ विज्ञको राय - Narayanionline.com Narayanionline.com राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको उपलब्धी के ? यस्तो छ विज्ञको राय - Narayanionline.com
वैशाख ११ गते चीन प्रस्थान गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १८ गते स्वदेश फर्किएकी छिन् । चीनमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई उच्च सम्मान दिइएको छ । नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेको चीनले राष्ट्रपतिलाई बोलाएर भव्य स्वागत गर्नु सकारात्मक संकेत हो । भ्रमणको क्रममा भएका समझदारी र सहमतिले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।